Waraaqda shaqaalaha oo ka socota J. Tkach, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Luqad kale- Jarmalka- Ingiriis- Talyaani- Française- Español- Português- Nederlandays- Deenish- Finnish- Af Iswiidhish- Noorwiijiga- Polish- Bulgarian- Ruush- Catalan- Basque- Irish- Welsh- Icelandic- Giriig- Scottish Gaelic- Turkiga- Slovenian- Yukreeniyaan- Roomaaniya- Armeniyaan- Azerbaijani- Lithuaniyan- Belarusian- Estoniyan- Joorijiyaan- Hangari- Galician- Boosniyaan- Makedoniya- Albaaniyaan- Slovak- Czech- Croatian- Corsican- Kurdiyiinta (Kurmanji)- Laatiin- Esperanto- Cibraaniga- Faaris- Carabi- Jabaaniyaan- Kuuriyaan- Shiine (Dhaqan ahaan)- Shiine (La Fududeeyey)- Filibiin- Indonesian- Latvia- Fiyatnaamiis- Malta- Thai- Hindi- Afrikaans- Malays- Sawaaxili- Haitian Creole- Bengali- Javanese- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mongolian- Nepali- Punjabi- Soomaali- Taamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
XAALADA SHAQADA EE JOSEPH TKACH
Dhibaatada fayraska Corona
Si kasta oo ay xaaladaadu u muuqato, si kasta oo ay u muuqdaan inay wax cilladaysan u muuqdaan, Ilaaheena naxariista leh ayaa aamin ah weligiisna waa Badbaadiyahayaga jooga iyo jacaylka. Siduu Bawlos qoray, waxba ma naga fogeyn karaan Ilaah ama naga fogeyn karno jacaylkiisa: “Markaa maxaa inaga kicin kara Masiixa iyo jacaylkiisa? Dhibaato iyo cabsi ayaa laga yaabaa? Cadaadis? Gaajo? Saboolnimo? Khatar ama dil dil? Runtii waa nala macaamilay, sidii horayba looguugu sharaxay Qorniinka: maxaa yeelay annagaa leh, Sayidow, meel kasta waa nala silcsan yahay oo meel walba waa laynaga laayay - waxaa lanoo laayay sidii ido oo kale! Laakiin ...
Akhri wax dheeraad ah ➜
Ilaah baa barakeeyey!
Warqadani waa xarafkeyga billaha ah ee ugu dambeysay anigoo ah shaqaalaha GCI maxaa yeelay waxaan howlgabaa bishaan. Markii aan ka fekero waqtigeyga xilka gudoomiye ee beesheena iimaanka, barakooyinka badan ayaa maskaxda ku soo dhaca oo Ilaahay ina siiyay. Mid ka mid ah barakooyinkaani waxay la xiriiraan magacayaga - "Grace Wadaagga Caalamiga ah". Waxaan u maleynayaa inay si quruxsan u qeexeyso isbeddeladeena aasaasiga ah ee bulsho ahaan. Nimcada Ilaah waxaan ku noqonay bulsho caalami ah, nimco ku saleysan aaminaad (Wadaag) in ...
Qiimaheena runta ah
Noloshiisa, dhimashadiisa, iyo sarakicistiisa, Ciise wuxuu siiyay aadanaha qiimo aad uga badan waxkasta oo aan waligeen kasameyn karno, kasban karno, ama xitaa maleyn karo. Rasuul Bawlos wuxuu u sharaxay sidan oo kale: “Haa, wali waxaan u arkaa inay waxyeello u geysaneyso aqoonta wanaagsan ee Masiixa, Sayidkayga. Waxaas oo dhami aniga ayay igu waxyeeleeyeen aawadiisa waxaanan u arkaa inay cilad ku tahay inaan Masiixa ku guuleysto ”(Filiboy 3,8). Bawlos wuxuu ogaa in ku noolaanshaha, xiriir qoto dheer oo lala yeesho Ilaah xagga Masiixa uu leeyahay mid aan xad lahayn, oo qiimo weyn leh - qiimo ...
Waa maxay sababta waxsii sheegyadu?
Had iyo jeer waxaa jiri doona qof sheegta inuu nebi yahay ama aaminsan inuu xisaabin karo taariikhda soo laabashada Ciise. Dhowaan waxaan arkay warbixin ku saabsan rabbaani oo la sheegay in uu ku xidho saadaalinta Nostradamus iyo Tawreed. Qof kale ayaa saadaaliyay in soo laabashada Ciise ay noqon doonto maalinta Bentakostiga 2019. Dad badan oo jeclaada wax sii sheegidda waxay isku dayaan inay ku xiraan wararkii ugu dambeeyay iyo waxsii sheegyada kitaabiga ah. Kark Barth wuxuu dadka ku booriyay inay si adag ugu sii nagaadaan Qorniinka halka ay ku dadaalayaan ...
Go'aanno ama duco
Sannad kale oo cusub ayaa bilaabmay. Dad badani waxay sameeyeen go'aanno wanaagsan sanadka cusub. Badanaa waxay ku saabsan tahay caafimaadka shaqsiga - gaar ahaan ka dib marka wax la cuno oo wax badan la cabbo xilliyada ciidaha. Dadka adduunka ku nool waxay u heellan yihiin inay sameyaan isboorti badan, cunaan macmacaan yar iyo guud ahaan doonaya inay waxbadan qabtaan. In kasta oo aysan jirin wax qalad ah oo qaadashada go'aannada noocan ah, haddana annagoo Masiixiyiin ah waxna uma dhinno qaabkan.
Go'aannadan dhammaantood waxay leeyihiin wax la xiriira awooddeena bini'aadamka, sidaa darteedna inta badan way ka baxaan. Xaqiiqdii,
Dhalashada bikradda Ciise
Ciise, oo ah wiilka weligiis ah ee Eebbe, wuxuu noqday bini-aadam. Haddii aan tani dhicin, ma jiri karto Masiixi run ah. Rasuul Yooxanaa sidan ayuu u dhigay: Waa inaad tan gartaa Ruuxa Ilaah sidan: ruux walba oo qirta in Ciise Masiix jidh ku yimid xag Ilaah buu ka yimid; Oo ruux walba oo aan qiran Ciise ma aha xagga Ilaah. Oo kanuna waa ruuxa kan Masiixa ka geesta ah oo aad maqasheen inuu yimaado, oo isagu dunida buu joogaa (1 Yooxanaa 4,2: 3).
Dhalashadii bikradda ahayd ee Ciise wuxuu sharraxay in Wiilka Ilaah uu si buuxda u noqday aadame sida uu ...
Buuggiisa "Kafaaro gudashada: Qofka iyo Shaqada Masiixa" [Dib u heshiisiinta: Qofka iyo Shaqada Masiixa] waxay leedahay…
Adeegso hadiyadda waqtiga
20-kii Sebtember, Yuhuuddu waxay u dabaaldegeen Sannadka Cusub, oo ah dabbaal aad u muhiim ah. Markaa qofku wuxuu u dabaaldegaa bilowga wareegga sanadlaha, wuxuu xusayaa abuuritaanka Aadan iyo Xaawo wuxuu kaloo xusaa abuuritaanka caalamka, oo ay ka mid tahay bilowga waqtiga. Intii aan akhrinayay waqtiga, waxaan xasuustay in wakhtigaasi sidoo kale leeyahay dhowr macno. Mid ka mid ahi waa wakhtigaas inuu yahay hanti ay bilyaneer iyo tuugleyaal leeyihiin isku waqti. Kulligeen waxaan haysannaa 86.400 ilbidhiqsi maalintii. Laakiin maadaama aanan badbaadin karin (waqtiga lama wareejin karo ama lama noqon karo), ...
Ilaah wuu jecel yahay dadka oo dhan
Friedrich Nietzsche (1844-1900) waxaa loo yaqaanay "caqiidada kama dambaysta ah" sababtuna tahay dhaleeceyntiisa caqiidada ah ee diinta masiixiga. Wuxuu sheegtey in Qorniinka Masiixiyiinta, gaar ahaan sababta oo ah xoogga la saaray jaceylka, ay ka dhalatay wax soosaarka, musuqmaasuqa, iyo aargudashada. Halkii uu ka fikiri lahaa in jiritaanka Ilaah ay suurtagal tahay, wuxuu ku dhawaaqay oraahkiisii ​​caanka ahayd "Ilaah waa dhintay" in fikirka weyn ee ilaah uu dhintay. Wuxuu damacsanaa inuu beddelo caqiidada masiixiga ee caado ahayd (oo uu ugu yeeray rumaysadkii hore ee dhintay) ...
Dhaqankeenna, erayga mucjiso waxaa badanaa loo adeegsadaa si khafiif ah. Haddii, tusaale ahaan, kordhinta ciyaarta kubbadda cagta koox wali u maamusho in ay si la yaab leh u dhaliso goolka guusha iyada oo la adeegsanayo toogasho 20 mitir ah, falanqeeyayaasha TV qaarkood ayaa laga yaabaa inay ka hadlaan mucjiso. Riwaayadda wareega, agaasimuhu wuxuu ku dhawaaqayaa mucjiso afar laab ah oo uu sameeyay farshaxan yahan. Hagaag, aad uma badna in kuwanu mucjisooyin yihiin, laakiin madadaalo cajiib ah.
Mucjiso waa dhacdo kadaran oo kadambeysa dhaxalka ...
Maxay kula tahay wacyigelintaada?
Waxaa loogu yeeraa falsafada iyo fiqiga fiqiga dhibaatada maskaxda-jirka (sidoo kale dhibaatada jirka iyo nafta). Maahan dhibaato ku saabsan isku-dubbaridida wadista wanaagsan (sida koobka oo aad wax ku cabto adigoo aan wax daadineynin ama tuuritaan qaldan markaad ciyaareyso ciyaar). Taabadalkeed, su'aashu waxay tahay jirkeenu waa jir ahaaneena fikirradeenuna waa ruux; si kale haddii loo dhigo, inay dadku si uun u yihiin jidhka ama isku darka jidhka iyo ruuxiga.
In kasta oo Kitaabka Quduuska ahi uusan si toos ah uga hadlin dhibaatada maskaxda ku haysa maskaxda, wuxuu ku jiraa tixraacyo cad oo ah ...
Sharciga Muuse ma isagaa khuseeya Masiixiyiinta?
Intaan aniga iyo Tammy ku sugaynay garoon diyaaradeed oo garoonkeenna diyaaradda ah muddo yar, waxaan arkay nin dhalinyaro ah oo fadhiya laba kursi oo dhawr jeer ila eegaya. Dhowr daqiiqo ka dib, wuxuu i weydiiyay, "Waan ku faraxsanahay, miyaad tahay Mr. Joseph Tkach?" Wuxuu ku faraxsanaa inuu ila hadlo oo wuxuu ii sheegay in dhowaan laga eryey bulshada Sabatariyiinta. Wadahadalkayagu goor dhow wuxuu u jeestay sharciga Ilaah - wuxuu ka helay hadaladayda mid aad u xiiso badan in Masiixiyiintu fahmaan in Ilaah ...
Muxuu Ciise ka leeyahay oo ku saabsan Ruuxa Quduuska ah
Mararka qaarkood waxaan la hadlayaa kuwa rumaysta ah ee ay ku adag tahay inay fahmaan sababta Ruuxa Quduuska ahi, sida Aabaha iyo Wiilku, uu yahay Ilaah - mid ka mid ah saddexda qof ee Saddexanka. Waxaan inta badan u adeegsadaa tusaalooyinka buugga si aan u muujiyo tayada iyo ficilada tilmaamaya Aabaha iyo Wiilku inay yihiin shaqsiyaad iyo in Ruuxa Quduuska ah lagu sharaxay si la mid ah qofka. Ka dib waxaan magacaabi doonaa magacyo badan oo loo adeegsado tixraaca Ruuxa Quduuska ah ee Kitaabka Quduuska ah. Ugu dambayntiina, waxaan galay waxa Ciise baray Ruuxa Quduuska ah. Tan…
Cafis waa furaha muhiimka ah
Anigoo damacsan inaan iyada siiso waxa ugufiican, waxaan ula tegey Tammy (xaaskeyga) qadada Burger King (waxaad jeceshahay), ka dibna waxaan usiiyay boqoradda caano macaan (wax ka duwan). Waxaad u maleyn kartaa inay tahay inaan ka xishoodo isticmaalka showyga ah ee halyeeyada shirkada, laakiin sida McDonalds dhigayo: "Waan jeclahay". Hadda waa inaan ku weydiiyaa (iyo gaar ahaan Tammy!) Cafis oo uga tag kaftanka nacasnimada ah. Cafisku waa muftaax u ah dhisida iyo xoojinta cilaaqaadka sii adkaysanaya oo xoogaysanaya. Tani waxay khusaysaa xidhiidhka ka dhexeeya ...
Marka ku xigta adeegga
Buugga Nexemyaah, oo ka mid ah 66-ka buug ee ku jira Kitaabka Quduuska ah, ayaa u badan tahay midda ugu yar ee la ogaaday. Malaha ducooyin qalbi furan iyo heeso sida Sabuul, ma jiro koonto weyn oo ku saabsan abuur sida buugga Bilowgii (Bilowgii) iyo taariikh nololeedkii ku saabsanaa Ciise ama fiqi ahaan Bawlos. Sikastaba ha noqotee, sidii Erayga Eebbe ee waxyiga ah, sidoo kale innaga ayay muhiim inoo tahay. Way fududahay in la iloobo marka la soo ban dhigayo Axdigii Hore, laakiin wax badan ayaan ka baran karnaa buuggan - khaasatan ku saabsan isku xirnaanta runta iyo qaab nololeedka tusaalaha ah.
Buugga Nexemyaah wuxuu ka mid noqday ...
Diinta New Atheism
Ingiriisiga, xariiqda "Marwada, sida aan u maleynayo, waxay amaantay [Ingiriis hore: mudaaharaadyo] aad u badan") ayaa laga soo xigtay Shakespeare's Hamlet, isagoo ku sifeynaya qof isku dayo inuu dadka kale ka dhaadhiciyo wax aan run ahayn. Xukunkani wuxuu maskaxda ku soo dhacayaa markaan maqlo dadka cawaannimada ka horyimaada oo sheegaya in diin laawe yahay diin. Qaar ka mid ah caabudayaasha diiniga ah qaar waxay ku caddeeyaan mudaaharaadkooda isbarbardhiga syllogistic-yada soo socda:
Hadday diin laawe tahay diin, markaa “bidaarta” waa midab timo leh. In kasta oo ay tani u dhawaaqi karto mid qoto dheer, mid keliya ayaa ...
Aniga waxaan kula hadlayaa su'aal muhiim ah adiga: Sideed u aragtaa kuwa aan rumaysnayn? Waxaan u maleynayaa inay tahay su'aal ay tahay inaan dhamaanteen ka fikirno! Chuck Colson, oo ah aasaasaha barnaamijka 'Prison Fellowship' iyo Barnaamijka Raadiyaha ee Breakpoint ee Mareykanka, ayaa mar su'aashan uga jawaabaya maahmaah: Haddii nin indha la 'cagta ku soo tuuro ama ku shub kafee kulul shaatigaaga, miyaad u cadhoon doontaa? Isaga laftiisu wuxuu ku jawaabayaa inaynaan suuragal ahayn inaan noqonno, si sax ah maxaa yeelay nin indha la 'ma arki karo waxa ka horreeya.
Fadlan sidoo kale tixgeli dadka aan ...
Ciidda Kirismaska ​​ugu wanaagsan
Sannad walba markay tahay Disembar 25, Masiixiyada waxay u dabaaldegtaa dhalashada Ciise, Wiilka Ilaah, oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd. Kitaabka Quduuska ah ma lihi taariikhda saxda dhalashada. Dhalashada Ciise malaha ma dhicin xilliga qaboobaha markii aan u dabaaldegno. Luukos ayaa ku waramay in Emperor Augustus uu amar ku bixiyay in dadka deggan guud ahaan dunida Rooma in laga diiwaangaliyo liisaska canshuuraha (Luukos 2,1) iyo “qof walba waa u diiwaangashanaa, mid walba oo magaaladiisa jooga,” oo ay ku jiraan Joseph iyo Maria, oo uur lahayd (Lk 2,3-5). Culimada qaar waxay leeyihiin dhalashadii dhabta ahayd ee Ciise ...
On hawl qarsoodi ah
Qof kasta oo aniga i garanaya waa ogyahay inaan ahay qof si weyn u qushuucaya muuqaalka bulsheed ee Sherlock Holmes. Waxaan hayaa qoraalo fanaaniin Holmes ka badan oo aan jeclaan lahaa inaan nafteyda qirto. Waxaan booqday matxafka 'Sherlock Holmes Museum' 221b Baker Street oo ku yaal London marar badan. Dabcan waxaan jeclahay inaan daawado filimada badan ee laga sameeyay dabeecaddan xiisaha leh. Waxaan si gaar ah isha ugu hayaa dhacdooyinka cusub ee waxsoosaarkii ugu dambeeyay ee BBC, kaas oo uu jilaagii filimka Benedict Cumberbatch ka ciyaarayo doorka baaraha caanka ah, oo ah sheeko-yaqaan cusub ...
Ciise waa dib u heshiisiinteenna
Sannado badan ayaan soomay Yom Kippur (Jarmal: maalinta kafaaraggudka), oo ah ciida Yuhuudda ee ugu sareysa. Waxaan ku sameeyay aaminaadda beenta ah ee ah in layla heshiiyo ilaahay adoo si adag u sheegay cunada iyo cabitaanada maalintaas. Qaar badan oo naga mid ah dhab ahaantii wali waan xasuustaa qaabkan qaldan ee fikirka. Si kastaba ha noqotee, tan ayaa naloo sharxay, ujeeddada soonka ee Yom Kippur waxay ahayd in lagu gaaro dib-u-heshiisiinteenna aan la yeelanno Ilaah iyada oo loo maro shaqooyinkeenna. Waxaan ku dhaqannay nidaam diimeed nimco iyo shaqooyin - waana iska indhatirnay ...
Maalinta Trump: Waa iid lagu rumoobay Masiixa
Bishii Sebtembar (sannadkan gaar ahaan Oktoobar 3), Yuhuuddu waxay u dabaaldegaan Maalinta Sannadka Cusub, “Rosh Hashana”, oo macnaheedu yahay "madaxa sannadka" af Cibraaniga. Dhaqanka Yuhuudda ayaa ah inay cunaan qayb ka mid ah madaxa kalluunka, oo ah astaanta madaxa sanadka, iyo inay midba midka kale ku salaamo "Leschana towa", oo macnaheedu yahay "Sannad wacan!". Dhaqan ahaan, waxaa jira xiriir ka dhexeeya xafladda Rosh Hashana iyo maalinta lixaad ee usbuuca abuuritaanka, oo Ilaah ku abuuray nin.
Qoraalka Cibraaniga ah ee Laawiyiintii 3:23,24 maalinta waxaa loo bixiyay "Sikron Terua", ...
Ducada - in ka badan ereyada uun
Waxaan u malaynayaa inaad sidoo kale soo martay wakhtiyo rajo xumo markii aad Ilaahay ka bariday inuu soo dhexgalo. Waxaa laga yaabaa inaad u duceysay mucjiso, laakiin wax aan micno lahayn ma jirin; mucjiso ayaa ku fashilantay in ay dib u dhigto. Waxa kale oo aan u qaatay in aad ku faraxsanayd in aad baratay in ducadii loo bogsiiyey qof loo jawaabay. Waan ogahay gabadh yar oo ay feeraha ku soo noqdeen kadib markay ducaysay inay bogsiisay. Dhakhtarku wuxuu kula taliyay: "Wax alla wixii aad sameysid, sii wad!" Inbadan oo kamida, waan hubaa, waa la qalday oo waan dhiirigelinayaa maxaa yeelay waxaan ognahay in ...
Injiil - Shayga Astaantan Lagu Yahay?
Mid ka mid ah filimkiisii ​​hore, John Wayne ayaa ku yidhi mid kale oo kaafiga leh, “Ma jecli inaan ka shaqeeyo bir-qorista - way i xanuunaysaa inaan joogo meeshii qaladka ahayd! in laga fikiro sida kaniisadaha u waxyeellayn karaan injiilka iyada oo loo adeegsan karo adeegsiga aan habooneyn ee farsamooyinka suuqgeynta sida kor u qaadista degdegga ah ee alaabada sumadda leh Waagii hore, aasaasayaasheena waxay raadinayeen meel iib ah oo xoog leh waxayna naga dhigeen "kaniisada kaliya ee runta ah". Qaabkan ayaa saameeyay kitaabiga ah ...
Hooyadu waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu waaweyn ee Eebbe abuuray. Taasi waxay maskaxdayda ku soo noqotay markaan ka fikirayey waxa aan siin karo xaaskayga iyo soddohda Maalinta Hooyada. Waxaan jecelahay inaan xasuusto ereyada hooyaday, oo inta badan usheegi jirtay walaalahay iyo aniga sida ay ugu faraxsan tahay inay hooyadey ahaato. Inaad ku dhasho wuxuu ina siin lahaa faham cusub oo ku saabsan jacaylka iyo weynaanta Ilaah. Waxaan fahmi karay oo keliya markii carruurteennu dhasheen. Wali waan xasuustaa sida aan ula yaabay markii ay xaaskeyga xanuunsadeen Tammy ...
Iftiinka Masiix wuxuu ku ifalayaa gudcurka
Bishii la soo dhaafay, dhowr wadaad oo GCI ah ayaa ka qeyb qaatay tababar gacanta ku saabsan wacdinta, oo loogu magac daray "Dibadaha", oo uu hogaaminayay Heber Ticas, isuduwaha qaran ee Adeegga Injiilka ee Grace Communion International. Tan waxaa la sameeyay iyada oo lala kaashanayo Waddooyinka Grace, oo ka mid ah bulshooyinka ku dhow Dallas, Texas. Tababarku wuxuu ku bilaabmay casharro jimcihi ah wuxuuna sii socday subaxnimadii Sabtida Wadaadada ayaa la kulmay kaniisadaha si ay albaab ugu galaan albaabka albaabka kaniisada iyo ...
Midnimada kala duwanaanta
Bisha Taariikhda Madoow waxaa halkan looga xusaa Febraayo kasta. Inta lagu guda jiro waqtigan, waxaan u dabaaldegeynaa guulaha badan ee ay dadka Mareykan Afrikaanku ka geysteen daryeelka wanaagga umadeena. Waxaan sidoo kale xusnaa silica jiilba jiilka ka soo kala jeeda, addoonsiga, kala sooca midab-kala-sooca iyo cunsuriyadda socota. Bishan waxaan gartay inay taariikh ku leedahay kaniisadda oo badanaa la iska indhatiray - doorka muhiimka ah ee kaniisadihii hore ee Afrikaanka Mareykanka ay ka ciyaaraan ...
Sannad Cusub Farxad Leh! Waxaan rajeynayaa inaad ku heshay fasax qaali ah dadka aad jeceshahay. Hadda oo xilligii Kirismasku inaga dambeeyo oo aannu ku noqon doono shaqada xafiiska sannadka cusub, waxaan haystaa, sida caadiga ah kiisaska noocaas ah, waxaan isweydaarsaday fikradaha shaqaalahayaga ku saabsan ciidaha la qaatay. Waxaan ka wada hadalnay caadooyinka qoyska iyo xaqiiqda ah in jiilalka da 'weynaa inta badan ay na bari karaan wax ku saabsan mahadnaq. Wareysiga, shaqaaluhu wuxuu ku xusay sheeko dhiirrigelin leh.
Tani waxay ku bilaabatay awowyaasheeda, kuwaas oo ...
Muuqaal aan muuqan
Waxaan u arkaa inay tahay wax lagu qoslo markay dadku yiraahdaan, "Haddii aanan arki karin, ma rumeysan doono." Waxaan badanaa maqlaa iyadoo la sheegayo markii dadku ka shakiyaan inuu jiro Ilaah ama inuu dadka oo dhan ku daro nimcadiisa iyo naxariistiisa. Si aanan u horseedin dembi, waxaan tilmaamayaa inaanan arkin magnetism ama koronto, laakiin waxaan ka garan karnaa saameyntooda inay jiraan. Isku mid ayaa la mid ah dabaysha, culeyska, codka iyo xitaa fikirka. Sidan ayaan u aragnaa waxa loo yaqaan "aqoonta aan aqoonta lahayn". Waxaan jecelahay inaan haysto aqoonta noocaas ah ...
Vor vielen Jahren, als ich mir die Frage stellte, nehme ich die Auferstehung…
Waxaan nahay sixir-barar iyadoo saaxirkii, oo silsilado ku xirnaa oo lagu xiray silsilado, loo tuuray haanta biyaha. Dabadeedna dusha ayaa xidhan oo kaaliye saaxirkuna korkiisa ayuu ku daboolayaa taangiga maro uu kor ugu qaadayaa madaxeeda. Dhowr daqiiqado ka dib maro ayaa hoos u dhacay oo waxaan la yaabanahay oo ku faraxsanahay saaxirka oo hadda saaran haanta iyo kaaliyihiisa, oo ay ku xiran yihiin silsilado, gudaha. Isweydaarsigan "lama-filaanka ah" ee lama-filaanka ahaa ee lama-filaanka ahaa wuxuu dhacayaa indhahayaga hortooda. Waxaan ognahay inuu jiro ...
Cilmiga fiqiga ayaa muhiim noo ah maxaa yeelay waxay bixisaa qaab aasaasi ah oo aan aaminsanahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira imminka fiqi ahaaneed ee badan, xitaa gudaha bulshada Masiixiyiinta dhexdeeda. Mid ka mid ah astaamaha lagu dabaqi karo WKG / GCI ee bulshada aaminaada ayaa ah go'aankeena oo ah waxa lagu tilmaami karo "fiqiga masiixiga". In kasta oo caqiidada masiixiga si weyn loogu aqoonsaday taariikhda kaniisadda, qaar waxay ugu yeedheen "caqiido la ilaaway" maxaa yeelay waa la iska indhatiri karaa marar badan. Si kastaba ha noqotee, gudaha WKG / GCI waxaan aaminsanahay xaqiiqdaas, taas oo ah, ...
Inbadan oo idinka mid ahi way ogyihiin markaan safrayo, inaan rabo inaan kuhadlo salaanta luuqada maxaliga ah. Waan ku faraxsanahay inaan ka gudbo fudud "hello" fudud. Mararka qaarkood, si kastaba ha noqotee, luqunta ama ka helitaanka luqadda ayaa jahwareerisa. In kasta oo aan ku soo bartay dhawr erey oo ku qoran luqado kala duwan iyo qaar ka mid ah Griig iyo Cibraaniga aqoontayda sannadihii la soo dhaafay, haddana Ingiriisigu waa luuqadda qalbigayga. Sidoo kale waa luuqadda aan ku duceeyo.
Markaan ka fikiro salaadda, waxaan xusuustaa sheeko. Waxaa jiray nin sidaas u rajeeyay ...
Diiradda saar nimcada Ilaah
Waxaan dhawaan arkay fiidiyowga dhigaya inuu ganacsato TV-ga ganacsiga. Xaaladdan oo kale waxay ku saabsanayd CD CD Christian khiyaali ah oo cinwaankiisu yahay "Waa Wax Walba Way Igu Tahay". CD-ga waxaa ka mid ahaa heesaha: "Sayidow Magacayga kor baan ugu qaadayaa", "Waan isa sarraysiiyaa" iyo "Ma jiro mid aniga la mid ah". (Ma jiro qof aniga oo kale ah). La yaab leh? Haa, laakiin waxay muujineysaa runta murugada leh. Dadku waxaynu caado u nahay inaan caabudno nafteenna bedelkii Eebbe. Sidii aan soo sheegay dhawaan, u janjeedha ayaa gaabinaysa waxbarashadeena ruuxiga ah ...
Iftiin, ilaaho iyo nimco
Markii aan ahaa da 'yarta, waxaan fadhiyey masraxa filimka markii awooddu dansanayd. Mugdiga, dhagta dhagaystayaasha ayaa sii kordhayay daqiiqad kasta. Waxaan ogaaday sida aan uga shakisan ahay waxaan isku dayayay inaan ka baxo meesha sida ugu dhaqsaha badan qof u furo albaabka dibedda. Iftiinka ayaa lagu shubay tiyaatarka filimka waana la carqaladeeyay oo raadinta aan ka shakiyay ayaa dhaqso u idlaaday.
Ilaa aan la kulanno mugdi, inteena badan waxaan si fudud ugu qaadanaa wax fudud. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax la arko oo aan iftiin lahayn. Waxaan aragnaa wax uun markii iftiinku uu iftiiminayo qol. Halkee tan ...
Soo-qaad: Ciise shalay, maanta iyo weligiis
Mararka qaarkood waxaan tagnaa Kirismaska ​​oo lagu dabaaldegayo Dhalashada Wiilka Ilaah oo leh xamaasad aad u badan oo aan u oggolaanayno Advent inuu qaato kursi gadaal ah, waqtigaas oo sannadku bilaabmayo kiniisadda masiixiga. Afarta Axadda ee Advent waxay bilaabmaan sannadkan Nofeembar 29 oo la keenayo kirismaska, oo ah iiddii dhalashada Ciise Masiix. Ereyga "Advent" wuxuu ka soo baxaa ad Latin Latinka waxaana loola jeedaa wax la mid ah "imaatin" ama "imaatin". Advent saddexda jeer "soo socda" ee Ciise ayaa loo dabaaldegayaa (caadiyan si isku xigta): ...
Farxadda daqiiqad iyo farxadda waarta
Markii aan kahelay qaacidadan sayniska ah ee farxadda maqaal kujira Psychology Today 1 Cod dheer ayaan qoslay:
In kasta oo qaaciddadan caqliga badani ay keentay farxad deg deg ah, haddana ma aysan keenin farxad waarta. Fadlan ha khaldin; Waxaan ku raaxaystaa qosol wanaagsan sida dadka kale oo dhami. Taasi waa sababta aan uga mahadcelinayo hadalka Karl Barth: “Qosol; waa waxa ugu cad ee ku saabsan nimcada Ilaah. In kasta oo farxadda iyo farxadda labadaba ay inaga dhigi karaan qosol, haddana farqi weyn ayaa u dhexeeya labada. Farqiga aan la soo kulmay sanado badan ka hor markii aan ...
Ciise shaqada saxda ah ee badbaadada
Dhamaadka dhammaadka injiilkiisa, faallooyinkaas xiisaha leh ee rasuul John ayaa la akhrin karaa: "Ciise wuxuu ku sameeyey calaamooyin badan oo badan xertii hortiisa aan ku qorin buuggan [...] Laakiin haddii mid mid loo qoro, Waxaan u maleynayaa in dunidu aysan fahmi karin buugaagta ay tahay in la qoro ”(Yooxanaa 20,30:21,25;). Iyada oo lagu saleynayo faallooyinkaas isla markaana la tixgelinayo farqiga u dhexeeya afarta Injiillada, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in sawirradan la soo qaaday aan loo qorin raad raac dhammaystiran oo nolosha Ciise ...
Saddex-geesood Eebbe: jacayl nool
Markii wax laga waydiiyo nolosha ugu da'da weyn, qaar baa laga yaabaa inay tixraacaan 10.000 oo geed oo geed jir ah oo Tasmania ah ama 40.000 sano jir ah oo ku yaal halkaas. Qaar kale ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan in ka badan 200.000 sano jir badeed xeebta Jasiiradda Isbaanishka. Intii ay dhirtan noqon karaan kuwa dhirtaba, waxaa jira wax ka sii cimri dheer - iyo kan waa Ilaaha daa'imka ah, oo lagu muujiyey Qorniinka inuu yahay jacayl nool. Dabeecadda Eebbe jacaylkiisa ayaa is muujiya. Jacaylku wuxuu ka dhexeeyey shakhsiyaadka Saddexanka ah (Saddexanka) hortood kahor intaysan abuurin ...
Imtixaan anaga aawadeen
Qorniinku wuxuu inoo sheegayaa in wadaadka sare ee Ciise "lagu tijaabiyey wax walba oo innaga la mid ah, laakiin isagoo aan dembi lahayn" (Cibraaniyada 4,15). Runtadan macnaha badan ayaa lagu muujinayaa taariikh ahaan, caqiidada masiixiga, taas oo sida Ciise, oo wadaad ah, uu ku qaatay door wakiilnimo lehna jidhkiisa.
Ereyga Latin-ka Vicarius macnihiisu waa "inuu qof wakiil ama wakiil u noqdo qof". Isaga oo jidhkiisii ​​galay, ayuu wiilka weligiis ah ee Ilaah noqday nin inta ilaalinaysa ilaahnimadiisa. Macnaha guud, Calvin wuxuu ka hadlay "isweydaarsiga mucjisada" ...
Markaan safrayo, badiyaa waxaa la i weydiiyaa inaan kahadlo howlaha kiniisadda ee Grace Communion International, shirarka, iyo kulamada guddiga. Mararka qaarkood waxaa la i weydiiyaa inaan ku hadlo barakada u dambaysa. Ka dib waxaan had iyo goor aqaanaa barakadii Haaruun ee cidlada ugu jirtay reer binu Israa'iil (sannaddii ka soo wareegatay markii ay Masar ka soo carareen iyo muddo dheer kahor intaysan soo gelin Dhulkii Ballanqaadka). Waqtigaas Ilaah wuxuu faray reer binu Israa'iil hirgelinta sharciga. Dadku waxay ahaayeen kuwo dag dag ah oo aan macquul ahayn (intaas oo dhan, waxay ahaayeen addoommo noloshooda oo dhan ...
Xilliga 'Advent iyo Kirismasku' waa xilli loo fiirsado. Waqti loo fasiro Ciise iyo jidhkiisa, oo ah wakhti farxad, rajo iyo ballan qaad. Dadka adduunka oo dhami waxay ku dhawaaqaan dhalashadiisa. Hal koronto Kirismaska ​​ka dib kan kale ayaa laga maqlayaa ether-ka. Kaniisadaha dhexdeeda, xafladda waxaa lagu dabaaldegaa riwaayadaha jiidda, cantatas iyo heeso wadani ah. Waa waqtigii sanadka qofku ku fikiri lahaa in adduunka oo dhami ay bartaan runta ku saabsan Ciise Masiix.
Laakiin nasiib darro dad badani ma fahmaan macnaha buuxa ee xilliga Kirismaska ​​waxayna u dabaaldegayaan ciida ...